Kwadebe $ 5000, opekempe, iji zụta iMac Pro | Akụkọ akụrụngwa
Na Nzukọ Mmepụta Ikpeazụ (WWDC) nke emere na June afọ a, Apple kwupụtara iMac Pro, ọgbọ nke iMac vitaminized nke ga-enwe ọnụahịa mmalite nke $ 4.999 tinyere ụtụ isi. Na mbido afọ, ụlọ ọrụ Cupertino kwenyere na ọ dị njọ na mwepụta nke Mac Pro na 2014, ngwaọrụ maka ọtụtụ ndị ọkachamara, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na enwere ike ịgbasa, anaghị enye anyị otu ohere ahụ dị na mbụ. Companylọ ọrụ ahụ kwupụtakwara na ọ na-arụ ọrụ na ọgbọ ọhụrụ nke nwere ike ịdakwasị ahịa n'ime afọ na-esote, mana iMac Pro abanyela n'ụzọ.
IMacized vitaminized na-enye anyị ike ruo ugbu a anyị nwere ike ịchọta na Mac Pro dabere na mmelite, mana ọ bụghị ihe ndị ọrụ pro Mac kachasị chọrọ, ndị chọrọ ike, njikọta na ikike iji melite oge, ihe iMac Pro anaghị enye anyị.
Usersfọdụ ndị ọrụ na-ekwu na iMac Pro na-akụ ahịa ahụ iji gbalịa mpi na Microsoft Mkpa Studio, Microsoft niile mebere obere ihe karịrị otu afọ gara aga ya na ihuenyo mmetụ aka nke na-enye ohere ịmekọrịta mmekọrịta na ihuenyo dị ka a ga - asị na ọ bụ mbadamba, nke na - enyere aka nke ndị na - emepụta ihe ọkachasị.
Na WWDC ikpeazụ, Apple kwuputara na nnweta iMac Pro ga-amalite na Disemba, ma megidere ihe mere HomePod, bụ onye e mere ndokwa ịmalite December ya, mana nke na-egbu oge, ihe Apple na-emebu. na-adịbeghị anya, ndị iMac Pro ma ọ bụrụ na ọ ga-abụ na ọ ga-izute n'obi imecha. Nye ndị niile bu n’obi ịzụ ya, ha kwesịrị iburu n’uche na echi, Disemba 14, oge ndoputa ga-amalite, na ọnụahịa nke $ 4.999 tinyere ụtụ isi, anyị amabeghị ọnụahịa na euro nke ọ ga-abata na Europe.
1 IMac Pro nkọwa
2 Ihe ọhụrụ T2 iji jikwaa usoro ndị ọzọ
IMac Pro nkọwa
Agba nke akụrụngwa na akụrụngwa, gụnyere eriri USB: Space ntụ, na-ahapụ ụdị ọcha na isi awọ nke bụrụ akụkụ nke iMac mgbe niile.
5-anụ ọhịa 27k retina gosipụtara na mkpebi nke 5.120 x 2.880 pikselụ. 500 nit nchapụta na agba agba gamut (P3)
8, 10 na 18 isi ihe nhazi.
Ebe nchekwa: 32, 64 ma ọ bụ 128 GB
Nchekwa: 1, 2 ma ọ bụ 4 TB SSD
Ndịna: Radeo Pro VEGA 56 na 8 GB nke nchekwa HBM2 / Radeo Pro VEGA 64 na 16 GB nke ebe nchekwa HBM2
1080 Igwefoto FaceTime HD
Thunderbolt 3 dijitalụ vidiyo mmepụta
Ndabere DisplayPort site na USB-C
VGA, HDMI, DVI na Thunderbolt 2 ndapụta site na nkwụnye.
Audio: Igwe okwu anọ, igwe okwu stereo, na ọkpọkọ isi okwu.
Njikọ ethernet 10 GB.
Ime anwansi, Ime Anwansi Anwansi 2 na Ime Anwansi Trackpad (nhọrọ) na ntụ ntụ.
Ihe ọhụrụ T2 iji jikwaa usoro ndị ọzọ
Ma ọ bụghị naanị na iMac Pro na-enye anyị ihe kachasị ọhụrụ na nhazi, kamakwa ọ na - etinye ihe ndị ahụXNUMXnd ọgbọ nke Apple T-usoro processors. Kpọmkwem T2, ihe nhazi nke ga-ahụ maka ịchịkwa usoro dị iche iche n'ụzọ nke abụọ dị ka usoro ezumike, nhazi ihe onyonyo, igwefoto FaceTime, ijikwa okpomọkụ nke akụrụngwa mepụtara ...
Ihe nhazi mbu nke usoro T a, T1, sitere n'aka MacBook Pro ohuru, ihe nhazi ihe nlere nke kwesiri jikwaa ọrụ nke Touch Bar na mkpịsị aka mkpịsị aka nke anyị nwere ike igbochi ịnweta akụrụngwa anyị. N'ụzọ dị otú a, a kwadoro na A11 Bionic ọhụrụ achọtara n'ime ụdị iPhone ọhụrụ agaghị adị na iMac Pro ọhụrụ ahụ, dịka a nụcharala asịrị ọnwa ole na ole gara aga.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Kwadebe ọ dịkarịa ala $ 5000 ịzụta iMac Pro
IPhone X enweworị mmepụta oyiri nke China ma na-erughị euro 300